Lesi ishede lesivini, esiguqulelwe ekubeni isitudiyo esithokomele esibheke lesi sitolo, isivini esiqhutshwa umndeni. Ibekwe phakathi kwezivini eduze kwekhaya lomndeni, lesi situdiyo sinikeza indawo yokuhlala ekahle. Ikhaya lesivini esisebenzayo kanye neDarnley Corner Wines
I-Vineyard Shed izimele ngokwayo. Indawo yesitudiyo esikhulu inokubukwa okuhle kwesivini. I-Vineyard Shed ishintshiwe isuka endaweni yokusebenza. Kuwumklamo oyisisekelo, kodwa othokomele. I-microwave kanye ne-hob ephathekayo kuyatholakala ukupheka ukudla. Asinikezi isidlo sasekuseni esiphekiwe; indawo yethu ifanele labo abaletha ukudla kwabo noma abafisa ukuyodlela out.
Uzojabulela ukuthula kwendawo, futhi isibhakabhaka sasebusuku siyamangalisa.
Ingadi/igceke langasese intuthuko yakamuva evumela izivakashi ukuthi zidle ngaphakathi endlini noma ngaphandle.
Ukuvakasha kwesivini kuyatholakala ngesicelo. Futhi singakunikeza ulwazi oluningi kumasayithi endawo nezinto okumele uzenze, kanye negama langaphakathi mayelana nezindawo zewayini, amakhefi nezindawo zokudlela.
Nakuba iyunithi izimele ngokugcwele u-Richard no-Anna bayatholakala ukuze bakusize uma kukhona okudingekayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kube okujabulisayo.
Ukuphuma nokushona kwelanga kuyamangalisa. Imibala ehlukahlukene emagqumeni azungezile iyaheha.
Indawo yethu izungezwe izivini namapulazi avulekile. Omakhelwane bethu yizimvu ezingomakhelwane, onogwaja ekuseni ngovivi noklebe abandiza phezulu.
Sihlanganyela nezivakashi kancane noma kakhulu ngendlela ezikhetha ngayo. Lokhu kuye kwasukela ekwamukeleni izivakashi kuya ekuchitheni isikhathi senza amasampula ewayini futhi sibonise abantu esigodini sase-Waipara. Uma kukhona ofuna okuthile ngokukhethekile lapho uhlala khona, sicela ubuze nje, futhi sizozama ukukwanelisa izidingo zakho.
Sihlanganyela nezivakashi kancane noma kakhulu ngendlela ezikhetha ngayo. Lokhu kuye kwasukela ekwamukeleni izivakashi kuya ekuchitheni isikhathi senza amasampula ewayini futhi sib…